मदन पुरस्कारको गरिमा जाेगाउन सकिन्न कि भन्ने डर लागेको छ : बानियाँ | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर अन्तर्वाता मदन पुरस्कारको गरिमा जाेगाउन सकिन्न कि भन्ने डर लागेको छ : बानियाँ
मदन पुरस्कारको गरिमा जाेगाउन सकिन्न कि भन्ने डर लागेको छ : बानियाँ
बानियाँले यसअघि ‘ऐतिहासिक पर्वत राज्य’, ‘खस जाति र कूलपूजा’ र ‘मृत्यु संस्कार मन्थन’ गरी तीन कृति प्रकाशित गरिसकेका छन । उपन्यास लेख्दाको पृष्ठभूमि, मदन पुरस्कार प्राप्त गरेपछिको अनुभूति र आगामी योजनाका बारेमा राससका ध्रुबसागर शर्माले लिएको अन्तर्वार्ता :
२०७६ सालको मदन पुरस्कार तपाईँको उपन्यास ‘महारानी’ले प्राप्त गरेकाे छ, देशकै प्रतिष्ठित पुरस्कार पाउँदा कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ?
प्राप्ति आफैँमा सुखकारक विषय हो । त्यसमा पनि अनपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनु थप आनन्दको विषय हुने नै भो । तर मलाई भने उपलब्धिभन्दा मदन पुरस्कारको गरिमा थाम्न सकिन्न कि भन्ने डर लागिरहेको छ ।
लेख्ने कोसिस त गर्दै आएको छु । भविष्यमा पनि प्रयत्न निरन्तर रहनेछ । तर आफ्नै लेखनशील्पसँग सन्तुष्ट हुन सकिएको छैन । मेरो भावना र मेरो जानकारीको संयोजन गरेर सुन्दर रचना गर्न मेरो कलमले सक्तैन । मेरो त्यही अनुभूतिले मदन पुरस्कार प्राप्त लेखकको गरिमा गौरव थाम्न सकिन्न कि भन्ने लाग्ने हो । त्यसमाथि थप म अलि अल्छी पनि छु । घुमफिर गर्न रुच्दैन । अन्तक्र्रिया र संवाद गर्ने बानी पनि छैन ।
तत्कालीन पर्वत राज्यको निर्माणमा मेरा पुर्खाको रगत पसिना भिजेको थियो । दुर्भाग्यवश पवर्तको त्यो इतिहास लेखिएन । पर्वत राज्यको अस्तित्व मेटिए पनि म त्यही माटोमा जन्मे हुर्केको मान्छे हुँ । पुर्खाको त्यो माटो, त्यो इतिहासप्रति मेरो मनमा अगाध श्रद्धा र गौरव छ । त्यसैैले त्यही इतिहास उधिन्नका लागि पनि विषय चुनिएको हो । अर्को कुरा तथ्य प्रमाणले पुष्टि गर्न नसकिने लोक कथनमा बाँचेको इतिहास लिपिबद्ध गर्ने समाजसमक्ष गरेको वाचा पूरा गर्न पनि यो विषय रोजेको हुँ । अर्थात यो लेखन आवश्यकताको उपज हो ।
उपन्यासमा आन्तरिक सत्ता सङ्घर्ष, अन्तरदेशीय षड्यन्त्र, द्वन्द्व र त्यसैमा घुनझैँ पिसिएकी राजकुमारीको कथा छ । उपन्यासमा परेका ती घटनावली सत्य हुन ?
तथ्यद्वारा प्रमाणित गर्न सकिने घटना हुन्थे भने इतिहासमै लेखिन्थे । उपन्यास सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकतै पर्दैनथ्यो । ‘महारानी’ ऐतिहासिक विषयवस्तुमा आधारित उपन्यास हो । सम्पूर्ण इतिहास होइन । सत्य कुरा कति मात्रै हो भने घनश्याम मल्लका दुई विमातृक भाइबीच सत्ता सङ्घर्ष चलेको र दाइद्वारा भाइको हत्या भएको कुरा सत्य हो ।
भद्रिवमको हत्यापछि उनकी रानी वेपत्ता भएको वा पारिएको कुरा पनि सत्य हो । तर त्यो घटनाको प्रत्यक्ष साक्षी छैन र विश्वसनीय भौतिक साक्षी पनि उपलब्ध छैन । त्यही अन्धकारमा रहेको इतिहासको पाटो अर्थात खाली ठाउँ भर्न कथानकको रचना गरिएको हो ।
माथि नै भनिसकेको छु कि समाजमा लोककथनका रूपमा बाँचेको कथा गाथाहरु ऐतिहासिक घटना नै हुन । समयक्रममा सत्य कुरा कुना पर्दै गयो र त्यसमा अनेक नयाँ फूलबुट्टा थपिए, भरिए । सत्य इतिहास भ्रमपूर्ण कथाको छाँयामा विलुप्त भयो । ‘महारानी’ उपन्यासले त्यही भ्रमको थुप्रोबाट इतिहास उधिनेर बाहिर निकाल्ने कोसिस गरेको हो । त्यसैले उपन्यासको प्रारम्भमै यो ‘इतिहास पुनर्लेखनको प्रयत्न हो’ भनिएको हो ।
उपन्यासमा वर्णित घटनाजस्तो अपेक्षाकृत कम उमेरकी विश्वप्रभामा रहेको असाधारण त्यागको भावना, घनश्याममा रहेको न्यायप्रियता र सुमन्तको विज्ञता जस्ता विषयहरु पाठकका लागि अलिक अस्वाभाविक लाग्लान कि भन्ने लागेन ?
डोली दिने प्रथा खास गरेर ठकुरी समाजमा रहेको परम्परा हो । त्यसको प्रत्यक्ष साक्षी मेरो पुस्ता छ । त्यो अनौठो विषय पनि होइन । उपयुक्त वरमा आँखा परेपछि जुनसुकै बाबुआमा आफ्नी छोरीको हात थमाउन उत्सुक रहन्छन । प्रत्यक्ष परोक्ष त्यस्तो पहल हुन्छ । त्यही चलनको औपचारिक नामकरण ‘डोली दिने’ प्रथाको रूपमा भएको हो । ठकुरी समाजले नाम दिएको मात्र हो । अहिले पनि उमेर पुगेकी छोरीका निमित्त उपयुक्त वर खोज्ने चलन हाम्रो समाजमा विद्यमान छ । अर्को अर्थमा त्यो पनि डोली दिने प्रथाकै निरन्तरता हो ।
ऐतिहासिक पर्वत राज्यको कथा ‘महारानी’ मा सम्पूर्ण समेटिएको छैन । कमसेकम पर्वत निर्माण, विस्तार र विभाजनसम्मको कथा परेको छ । पर्वतमा मल्ल वंशले शासन गरेको ५०० वर्षमध्येको पछिल्लो झण्डै ३५० वर्षको इतिहास संक्षिप्तमा आएको छ । अझै करिब १५० वर्ष बाँकी रहन्छ । बाँकी इतिहास आउने गरी अर्को एउटा उपन्यास लेख्नुपर्ने आवश्यकता अनुभूत गरेको छु । परिणाम भविष्यको हातमा ।
ऐतिहासिक घटनावलीलाई उपन्यासको कथामा ढाल्न र समेट्न कत्तिको सजिलो वा अप्ठेरो अनुभव गर्नुभएको छ ?
लेख्नु सजिलो कुरा होइन । अझ ऐतिहासिक उपन्यास लेख्नु सामाजिक विषयवस्तुको उपन्यास लेख्नुजस्तो सजिलो कुरा होइन । घटना, समय, पात्र, विषयवस्तुको निश्चित घेरा र सीमा हुन्छ । निश्चिन्त भएर कल्पनामा मुक्त कलम चलाउन पाइँदैन । सामाजिक उपन्यास घरमै बसेर कल्पना गर्न सकिन्छ । ऐतिहासिक उपन्यासका लागि तथ्यको पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । सत्यको अन्वेषण अनिवार्य पाटो मानिन्छ ।
‘महारानी’ उपन्यास सिर्जना गर्दाका कठिनाइ के कस्ता रहे होलान ?
पहिलो कुरा तत्कालीन खस भाषिकाको खोज गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । पर्वत राज्यकालका सीमित लेखोट उपलब्ध छन । कैयौँ लेखोट ‘डिकोट’ गरिदिने विज्ञको आवश्यकता पर्छ । पाँच सय वर्षको लामो अवधिमा लेखिएका दुई दर्जनभन्दा बढी लेखोटबाट भाषाको नमूना निकाल्नु निकै गाह्रो काम हो । किनकि भाषा निरन्तर विकासशील हुन्छ, परिविर्तनशील हुन्छ । पाँचसय वर्षमा त भाषामा आनको तान फरक परिसक्छ । किनकि भाषा निरन्तर विकासशील र परिविर्तनशील हुन्छ । स्वभाविक रुपमा केही भाषागत कठिनाइकाे सामना गर्नुपर्याे ।
लागुऔषध र गाँजा बेचेर कमाउन पल्किएकाले अरू पेशामा रम्दैनन्